Faham Darida Jeceylka Laga Haysto | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Muslimo Cabdullaahi — August 6, 2020
Jecelka waxa uu leeyahay muhiimad aad u wayn oo aysan dadkeena intooda badan fahansaneen. Waxaan aminsanahay dadka intooda badan jeceelka waxa ay ka heestaan fahan qaldan, sababtoo ah waxaa inta badan kusoo dhaca maxkaxdooda jeceelka ninka iyo naagta dhexmara oo kaliya.
Kaas xittaa ma’ahan mid qaldan ee waa nooc jeceelka ka mid ah laakiin inta badan kaas ayaa dadka wax badan ku haleyaan ayagoo si qaldan u isticmaala. Marka waxaa dhihi karaa waxaa jirta faham yari ku saabsan jeceelka qaybihiisa iyo muhiimada uu inoo leeyahay nolasheena.
Haddii aad dadka intooda badan waydiiso jeceel waxa ugu horeeyo oo qofkasta maskaxdiisa ku soo dhacaa wa tariiqdiisa jeceel oo dhanka guurka am dhanka hasaawaha guurka ka hor. Intaas bes ayey jeceel ka aminsayihiin dadka intooda badan, laakiin jeceel intaas waa ka baaxad wayn yahay.
Allihii ina uuntay iyo nabbigeena suubanaa (SCW) oo aan jeclaano iyo diinteena islaamka waa qeybta ugu horeeya ee jeceylka ayaan oran karaa. Waana jecel midka ugu wanaaga iyo farxada badan inta nooc oo jeceel koonkaan ka jira, balse waaba waajib ayaan oran karaa.
Dad qaar ayaa oronaayo Allihii ina uuntay iyo diinteena waan jecelnahay hadana aanan ka muuqan ficil ahaan. Sida caadiga ah dadka dadka ay jeceel yihiin waxa ay ka reebaan waa ay iska dayaan, kawaran Allihii waynaa oo na uutay haddii aan ka reebtoomin wuxa uu inaga reebay oo dhahno Allihii in uuntay waan jecelnahay.
Qofka Alle jecel wuxuu faray waa in uu sameeyaa wuxuu ka reebana ka reebtoomaa. Waana waajib ay nafarayso diinteena wanaagsan ee islaamka.
Walidkaada oo aad jeclaato waa nooc kale aad u wanaagsan oo jeceelka ah, aadna u qurxoon ayaan oron karaa. Waayo ayaga la’aantooda dunida maadan imaadeen Alle ka sakoy. Balse waaba kugu waajib in aad walidkaada jeclaato oo aad u dhimriso.
Qofaa ku oronaayo waxaan doortay qoftaan jeclaa oo waalidkaygaan ku caasiyey asagoo mujinaayo qofkaas in uu yahay qof geesi ah jeceelkana wax ka yaqaano jeceel dartiisana wax walbo u samayn karo. Laakiin wuxuu illoobay in waalidkii ku soo barbaariyey jecelkooda aad dayacday ku kale oo laga yaabo in uu dhammaado ka doortay, laakiin kan waalidka waa mid aan marnaba dhamanaynin. Qofkaas jeceel ayuu wax ka yaqanaa ma oran kari aniga fikir ahaantayda.
Naftaada aad jeclaato waa qeyb ka mid ah jeceelka, soomaali waxay hore ugu maahmaahday “tiisa daryelaa tukale ku daro”.
Qofkii naftiisa jeclaadaa wax jeclaan karo jeceelna laga heli karaa. Qofka in uu naftiisa jecelyahay waxaa lagu aqoonsadaa sida uu naftiisa u hormariyo, ma’ahan micnaheeda in aad noqoto qof (selfish) ah oo tiisa bes ku dadaalo.
Aniga waxaa qabaa qofka naftiisa daacad u jecel in uusan ahayn qof (selfish) ah, bal uu yahay qof jeceylka wax ka yaqaano waxna jeclaan kara.
Waxaan arkaa ama maqlaa qof ku dhahaayo jeceyl dartiisa isku dilaa ama isku dilay oo rabo in uu muujiyo in uu yahay qof jeceylka wax ka yaqaano ahna geesigii jeceelka. Qof naftiisa Alle amaanada ugu dhigay in uu dhib u geesto rabo wax ma jeclo ayaan aaminsanahay, waayo horaan usoo sheegay qofkii naftiisa jeceladaa wax jecladoo jeceelna bixiyo.
Qofkasto naftayda wan jelahay ayuu ku oronaa, lakiin dad yar ayaa muujiyo jeceelka ay naftooda u qawaaan oo naftooda daryeelo isla markaasna hormariyo. Jeceel waa ficil maahan ereyo kaliya marka waa in aad naftaada jeceelkeeda ficil ku mujisaa oo aad hormariysaa.
Ehelka, walaalaha, asxaabta,qaraawada jeceelkooda waa qeeb ka mid ah jecelka. Ayaga iyo Allihii ku uuntay iyo waalidkaada aad jeclaato waa jeceelka dunida ugu sareeyo oo aad farxad iyo jecel aad ayaga ka hesho ku dheefaysid aaqiro jano. Waayo adduunka Allihii ku uuntay ayaad jeceshahay oo wuxuu ku fara waad samaysaa wuxuu ka reebana waad ka reebtoontaa, marka aduun iyo aaqiro waad guulaysanaysaa. Xitaa diinteena ayaaba ina farayso in aan wax jeclaano nafteena jeclaano.
Jeceylka ninka iyo naakta asna waa jeceel aad u baaxad wayn oo lagamamaarmaan ah,nolasha ka ciyaaro door muhiim ah waajecel farxadiisa iyo murugadiisa leh. Sida uu ku luuqeeyey fanaankii soomaliyeed ee magaciisa la oran jiray (Sallax Qaasin) “waa macaan amba waa kharaar kolba waa siduu kugu soo mare” marka qof walba iyo nasiibkiisa.
Lakiin dadka jeceelka nocaan ah ayey jeceel ku kobeen oo kan haddii uu qofka si fiican ku soo maro jecel waa jeclahay ayuu ku oronaa lakiin kan haddii uu si xun ku soo maro wuxuu ku oronaa jecel aduunka ugu necbahay.
Qofkaas wuxuu ilaabay in jeceel uusan kan kaliya ahay oo noocyo badan oo jeceel ah ay jiraan, nolashana u ah lagammarmaan qaarkoodana wajib ah qaar kalena nolashaada jiritaankeeda ku xerentahay. Inta badan qofka haddii uu hagaayo jeceelada kale oo nolashiisa kana wuu hagaagay.
Tusaale qofaan jeclaa ayaan waayey waa in anan jecel nicin oo aan aminaa qadarka Allihii aan jeclaa oo nasiibkayga aanan ka quusan. waa sax ma sahlano in aad waydo qof aad jeclaatay lakiin jeceelada kale oo nolashaaada ayaa kan murugadiisa ka bad baadinaayo haddii aad hore kuwaas usoo saxay.
Jeceylka lamaanayaasha waxa uu ugu duwan yahay jeceelada kale waxa uu leeyahay murugo iyo farxada labbada, halka kuwa kale ay intoo badan farxad bes ah leeyihiin. Xaqiiqdi Allihii na uunto oo aan jeclaano,walidkeena, nafteena iyo inta kale oo nodhow waxaan ka dhefaynaa farxad anan marno murugo lahay.
Balse kuwaan waxay murugo leeyihiin marka ay kaa geriyodaan waalidka iyo inta kale aad jecleed lakiin hadana waxaad ku sabraysaa Allihii ku uunto aad jecleed qadarkiisa. Marka jeceelkaan murugo malaha. Lakiin dadka qaar waa ay ka ildho doorsameen oo inta badan jecelka ninka iyo naakta dhexmaro ayey jeceel oo idil ku sifeyeeen. Maskaxdoodana kaas bes wixii uu galay am geestay ayaa ka dhex guuxaayo.
Tags: Faham Darida Jeceelka
Next post Ma Dooneyno Dawladd Daciif ah iyo Ganacasato Awoodd leh!
Previous post Sebenkan Maanta Aynu Joogno Dhalinyarada iyo Jiilasha Haatan soo Kacaamaya